न्युजिल्याण्डमा बन्ने भो ‘नेपाल घर’ « Nepal – the country of Mt. Everest and Buddha
« Facebook Upshot: बुद्ध जन्मस्थलबारे दलाई लामाको बिबादास्पद भनाइ
नेपाली सन्चारद्धारा रामकुमार श्रेष्ठसंग गरिएको जानकारीमूलक कुराकानी »
न्युजिल्याण्डमा बन्ने भो ‘नेपाल घर’
Posted by Ram Kumar Shrestha on September 12, 2012
२७ भदौ, सिड्नी । नेपाली कला संस्कृतिको परिचय दिन न्युजिल्याण्डमा नेपाल घर बन्ने भएको छ । गैर आवासिय नेपाली संघ (एन आर एन) न्युजल्याण्डको संयोजनमा यो घर बन्न लागेको अष्ट्रेलियाबाट संचालित कम्युनिटी न्यूज पोर्टल एयुनेपाल डटकमले जनाएको छ । एनआरएन अध्यक्ष चक्र थापाले भने ‘नेपाल र न्युजल्याण्डको सम्बन्ध प्रगाढ बनाई राख्न एडमण्ड हिलारी र तेन्जिङ शेर्पा हाउस बनाउने योजनामा छौं ।’ नेपाल घर निमार्ण गर्न कम्पनि दर्ता भैसकेको छ । राजधानी अकल्याण्ड शहरमा जग्गा किनेर भवन बनाउने थापाको भनाई थियो । ‘एन आर एन न्यूजल्याण्ड, हिमालयन ट्रस्ट र न्यूजल्याण्ड सरकारसँग पनि आर्थिक सहयोग मागेर भवन बनाउने योजना हाम्रो छ ।’ थापाले भने ‘सबै तयारी भैसकेको छ । अब एक दुई महिनाभित्र यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने छौं ।”
कस्तो हुनेछ नेपाल हाउस ?
भवनको अगाडि एडमण्ड हिलारी र तेन्जिङ नोर्गेको प्रतिमा रहन्छ । नेपाल हाउस भएका कारण नेपालको कला, संस्कृति झल्काउने सबै कुरा त्यहाँ हुनेछ । भवनलाई नेपाली ढाँचामा भित्र र बाहिर सजावट गरिने छ । पेगोडा शैलीको छाना रहेको यो भवनमा नेपाली भाषा विद्यालय पनि संचालन हुनेछ । एउटा सानो नेपाल त्यहाँ देख्न पाईन्छ । अहिले नेपालीहरुले कार्यक्रम गर्दा हल खोज्दै हिड्नुपर्ने बध्यता रहेको छ । त्यसैले पाँच सय जना अटाउन सक्ने हल पनि त्यहाँ हुनेछ ।
नेपालको न्यूजल्याण्डसँग निकै घनिष्ठ सम्वन्ध रहेको छ । हिमाल आरोही सर एड्मण्ड हिलारीका कारण यो सम्वन्ध गाढा रहँदै आएको हो । सन् १९५३ हिलारी र तेन्जेङ नोर्गे शेर्पाले संयुक्त रुपमा सगरमाथा आरोहण गरेदेखिनै नेपाल र न्युजिल्याण्डबीच कुटनीतिक सम्वन्ध स्थापित भएको थियो । हिलारीले हिमायन ट्रसमार्फत नेपालमा शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्दै आएका थिए ।
अहिले ओभरसिज डेभलप्मेन्ट एसिस्टेन्ट अन्तर्गत गएको तिन वर्षमा ६ लाख पचास हजार डलर बराबरको अर्थिक सहयोग न्युजल्याण्डले नेपाललाई गरेको छ । बर्षौ अघिदेखी नेपालीहरु हिमाल चढ्ने प्रविधिक सम्वन्धि तालिम लिन न्युजिल्याण्ड आउन थालेका हुन् । अहिले करिव दुई हजारको संख्यामा नेपालीहरु यहाँ बसेर अध्ययन तथा रोजगारी गरिरहेका छन ।
This entry was posted on September 12, 2012 at 12:23 pm	and is filed under समाचार. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.